ကမ်းခြေရှိပိုင်ဆိုင်မှုများ - ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း
ခံစားချက်တွေကို မြို့အားလုံးAdejeAgua DulceAlcalaArafoArguayoAricoAronaBajamarBuenavista Del NorteBuenavista ဂေါက်သီးCandelariaayရာဝတီကChioကော့စတာ Del SilencioCueva De PolvoCueva Del Vientoအယ်လ်ဂျာရာလာအယ်လ်မက်ဒီနိုအယ်လ်Porísအယ်လ် Prisအယ်လ် Sauzalအယ်လ် TanqueFasniaGarachicoမျိုးရိုးဗီဇGranadilla De AbonaGuia De IsoraIcod De Los VinosguရာဝတီJoverla Calderala Caleta De Guimarla Caleta De InteriánLa LagunaLa Montañetala Orotavala Reinala VegasLas AguasLas CaletillasLas CaletitasLas ErasLas LagunetasLas ManchasLas Portelasလာ့စ်ဗီး RosaLos AbrigosLos CristianosLos GigantesLos RealejosLos SilosMascaPalm MarPalmarParque De La ReinaPlaya De La ArenaPlaya De San JuanPlaya ParaisoPlaya စန်းမားကို့စပလာယာ SiboraPuertito De GuimarPuerto De La CruzPuerto De SantiagoPunta De Hidalgoစန်းအန်ဒရေ့စ်San Eugenioစန်း IsidroSan José De Los LlanosSan Juan De La RamblaSanta Ursulaစန်တီယာဂို Del TeideSotavientoကျောက်တံတားပုဂံTajaoTamaimoTauchoTejina De Isora
ရောင်းရန်: Playa Jover၊ La Laguna, Tenerife ရှိသမုဒ္ဒရာရှေ့ကမ်းခြေကျယ် သဘာဝရေကန်များနှင့်မီတာအနည်းငယ်အကွာအဝေးတွင်သမုဒ္ဒရာရှိပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာ ...
ကမ်းခြေကနေတိုက်ခန်း 50 မီတာ!
Candelaria ရှိကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၅၀ ရှိသောတိုက်ခန်း !! အလွန်ကောင်းသောနေရာနှင့်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားရှုပ်ထွေး! အခွင့်ထူးခံပတ်ဝန်းကျင်၌။ ဓာတ်လှေကားနှင့်အတူ 50th ကြမ်းပြင်။ လှေခါးထစ်။ ရေကူး ...
San Eugenio ရှိတိုက်ခန်း, Costa Adeje
စန်း Eugenio, Adeje Tenerife
Caledonia ပန်းခြံရှိ Costa Adeje၊ San Eugenio၊ Torviscas Alto inရိယာတွင်ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်း အသင့်နေထိုင်နိုင်ပါသည်။ ည့်ခန်း၊ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊
Ocean Front House + ၄ အားလပ်ရက်တိုက်ခန်းများ။
Taganana၊ Santa Cruz de Tenerife Tenerife
သမုဒ္ဒရာမှာတိုက်ရိုက်ရောင်းချရန်! Anaga ၏ Almaciga ကျေးလက်ပန်းခြံ! အားလပ်ရက်နေအိမ် ၄ ခုနှင့်လတ်တလောအားလပ်ရက်နေအိမ်များအဖြစ်ငှားရမ်းထားသောသီးခြားလွတ်လပ်သည့်အိမ်လေးလုံးပါသောအဆောက်အ ဦး ...
Puerto ခုနှစ်တွင်ပြန်လည်ပြုပြင်မြေမှုန့် - မုန့်ညက်ခေါင်မိုး
လှပသော Loft ကိုအဆင့်များစွာ 130m2 တွင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် အသစ်ပြုပြင်လိုက်ပြီ! နေထိုင်ရန် (သို့) ငှားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ Puerto de la Cruz ၏ဗဟို၌။ အဲဒါ ...
ဘဝကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကမ်းခြေစတူဒီယိုတိုက်ခန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ San Marcos ကမ်းခြေရှေ့တွင် Idyllic တည်နေရာ! မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများ! ဓာတ်လှေကားနှင့်အတူကောင်းသောရှုပ်ထွေးသော ...
ရောင်းရန်: တစ်ဝက်စီပါ ၀ င်သည့်အိမ်တစ်လုံးလုံးကိုပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့သည်။ ဒါဟာ Arona, Palm Mar ၏လူနေအိမ်inရိယာ၌တည်ရှိသည်။ အိပ်ခန်း ၃ ခန်းပါ ၀ င်သည်။
Big Oceanfront ၂ ထပ်ပါ Penthouse
Tenerife ပင်လယ်နှင့်မြောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းရှုခင်းများကိုမြင်တွေ့ရသည့်ထောင့်ချိုးအထပ်နှစ်ထပ်ရှိတိုက်ခန်း။ အလွန်တောက်ပ။ နေသာသော၊ ၁၂ နှစ်သာရှိသောအဆောက်အ ဦး၊ ၁၀၄ ...
San Marcos တွင်ကမ်းခြေတိုက်ခန်း!
ရောင်းရန်: Playa San Marcos ရှိပြီးပြည့်စုံသောတိုက်ခန်း! ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၁၀၀ သာလျှင်! အမြင်များနှင့်အတူနေသာကျန်ကြွင်းသောအရပ်! နိမ့်ရပ်ရွာကြေး တိတ်ဆိတ်သောနေရာ! လွယ်ကူပါတယ် ...
La Arena ကမ်းခြေမှမီတာ ၃၀၀ ကျယ် ၀ န်းသော ၄ ထပ်တိုက် Townhouse !!
Playa de la Arena၊ Santiago del Teide
Tenerife၊ Playa de la Arena တွင်ရောင်းရန်ရှိသောကျယ် ၀ န်းသော ၄ ထပ်တိုက်လုံးချင်း သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၁၅၀ အကွာတွင်တည်ရှိပြီး ...
ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၁၀၀ အကွာတွင်ရှိသောနှစ်ထပ်တိုက်ခန်း
ရောင်းရန်: La Caleta de Interian၊ Garachico, Tenerife ၏ဒုတိယသမုဒ္ဒရာအတန်းတွင်လှပပြီးကျယ် ၀ န်းသောနှစ်ထပ်တိုက်ခန်း။ မီတာ ၁၀၀ အကွာမှာပဲ။
အံ့သြဖွယ်အမြင်များဖြင့်ကြီးမားသော Oceanfront အိမ် !!
အယ်လ်Porís, Arico Tenerife
ရောင်းရန် - စပိန်နိုင်ငံ၊ ကဲရီရီယားကျွန်း၊ တနန်းရီဖာတောင်ပိုင်းရှိတိတ်ဆိတ်သောကမ်းရိုးတန်းမြို့ဖြစ်သောအဲလ်ပိုရစ်စ်တွင်အထူးသီးသန့်ပင်လယ်ကမ်းခြေပိုင်ဆိုင်မှု! ထိပ်ဖူး“ Porís” မှာ ...
Alcala ရှိသမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၆၀ ရှိသောအိမ်။
ရောင်းရန် - Alcala၊ Guia de Isora, Tenerife ရှိ ၄ ထပ်အဆောက်အအုံကြီး။ မြင်ကွင်းကျယ်ရှုခင်းများနှင့်သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၆၀ အကွာတွင်တည်ရှိသောနေရာဖြစ်သည် ၃ ထပ်၊
Los Gigantes ရှိဇိမ်ခံတိုက်ခန်း!
ရောင်းရန်: Los Gigantes ရှိ Tenerife ရှိဇိမ်ခံအိမ်ခန်း၏လှပသောတိုက်ခန်း။ နှစ်ခုကြီးမားသောရေကူးကန်များနှင့် Jacuzzis! သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူကျယ်ဝန်းကျန်ကြွင်းသောအရပ်! လေ ...
Downtown Los Gigantes ရှိတိုက်ခန်းကျယ်
ရောင်းရန်: Los Gigantes, Tenerife မြို့လယ်မှာရှိတဲ့ကျယ် ၀ န်းသောတိုက်ခန်း။ မြို့လယ်ခေါင်နှင့်အနည်းငယ်အကွာအဝေး ...
ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောကိုလိုနီခေတ်အိမ် သမုဒ္ဒရာ 100 မီတာ !!
သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၁၀၀ နှင့် Tenerife, La Caleta de Garachico ကမ်းခြေနှင့်သာလျှင်လှပပြီးစတိုင်ကျသောကိုလိုနီခေတ်အိမ် !! လတ်တလော ...
မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များနှင့်အတူကြီးမားသော Terrace Penthouse!
ရောင်းရန်: Los Gigantes, Tenerife ရှိမြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူထူးခြားသောအိမ်ခြံမြေ! တိုက်ခန်းသည်အိမ်နီးချင်းတစ် ဦး တည်းနှင့်နောက်ဆုံးထပ်တွင်တည်ရှိသည်။
Puerto Santiago ရှိပင်လယ်ရှုခင်းများပါသောတိုက်ခန်း
ရောင်းရန် - ပန်တိုဒီယန်တီယာဖာ၊ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းနှင့် big ည့်ခန်းကျယ်ကြီး! မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်နေသာကျန်ကြွင်းသောအရပ် ...
သဲသောင်ပြင်ကနေ Excellent House 150m!
ရောင်းရန်: Tenerife၊ Puerto de Santiago ရှိမြို့ဟောင်းတွင်မြင်ကွင်းကျယ်ပင်လယ်ရှုခင်းများပါ ၀ င်သည့်အလွန်ကျယ်ဝန်းသည့်ကျယ်ဝန်းသောအိမ်ခြံမြေများ! Chica ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၁၅၀ အကွာတွင်တည်ရှိသောနေရာဖြစ်သည်။
Nice Compact ကမ်းခြေရှိတိုက်ခန်း + ရေကူးကန်!
Playa de la Arena၊ Santiago del Teide Tenerife
ရောင်းရန်: Playa de la Arena, Tenerife ရှိအထူးအိမ်ခြံမြေများ La Arena နှင့်မီတာ ၁၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသောအလွန်ကောင်းမွန်ပြီးသက်တောင့်သက်သာရှိသည့်တိုက်ခန်း
သီးသန့်နေရာတွင် ၁၀၀% ပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသော Penthouse!
€ 1,600 တစ်လလျှင်
ရောင်းရန်: Playa de la Arena, Tenerife ရှိအထူးသီးသန့်အိမ်ခြံမြေ! အမြင့်ဆုံးထောင့် Penthouse တိုက်ခန်းသည်အစွန်အဖျားတွင်သီးသန့်တည်ရှိပြီး ... မရှိ
ခေါင်မိုးပေါ်တွင်ဇိမ်ခံတိုက်ခန်း + Infinity ရေကန် !!
ရောင်းရန်: သမုဒ္ဒရာရှုခင်းနှင့် Playa de la Arena ရှိရေကန်များ၊ ကြီးမားသောကျန်နှစ်နေရာပါ ၀ င်သောမကြာသေးမီကတည်ဆောက်ခဲ့သောတိုက်ခန်း ...
ရေကူးကန်နှင့်အတူ Oceanfront တိုက်ခန်း !!
ရောင်းရန်: Playa Sibora, Tenerife ရှိပထမတန်းတန်းတိုက်ခန်း။ အံ့သြဖွယ်မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ !! တိုက်ရိုက်သမုဒ္ဒရာမှာပြီးပြည့်စုံသောတည်နေရာ! ပင်လယ်ကြီးနှင့်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောရပ်ရွာလူထု ...
2 Terraces + Garage ရှိသည့်ကျယ်ဝန်းသော Oceanfront တိုက်ခန်း !!
ရောင်းရန်: Playa Sibora၊ Los Silos၊ Tenerife ရှိပထမ ဦး ဆုံးသမုဒ္ဒရာအတန်းတွင်တိုက်ခန်း !! အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာမှအလှမ်းဝေးသောမြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူအံ့ဖွယ်ပိုင်ဆိုင်မှု ...
မြင်ကွင်းကျယ် Ocean ရှုခင်းနှင့်အတူတိုက်ခန်း!
ရောင်းရန်: ဘန်ဟာမရ၊ Tenerife ရှိပြင်ဆင်မွမ်းမံရန်တိုက်ခန်း။ မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများ! ရေကူးကန်နှင့်အတူရှုပ်ထွေးသော! ကမ်းခြေသို့လမ်းလျှောက်ရန်၊ သဘာဝရေကန်များနှင့်လှိုင်းအစက်အပြောက်များရှိသည်။
ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသော Oceanfront တိုက်ခန်း!
အယ်လ် Pris, Tacoronte Tenerife
ရောင်းရန် - အဲလ်ပရစ္စ၊ တီနာရီနီမြို့ရှိသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေရှိတိုက်ခန်း။ မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာအမြင်များ။ အများပြည်သူအတွက်အခမဲ့ကားရပ်နားရန်နေရာ။ ဓာတ်လှေကား။ သဘာဝရေကန်များနှင့်အနည်းငယ်သာကွာဝေးပါသည်။
Garachico ၏စင်တာတွင် Oceanfront Penthouse!
ရောင်းရန်: Tenerife၊ Garachico အလယ်ဗဟိုရှိ Penthouse တိုက်ခန်း။ မြင်ကွင်းကျယ်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်အတူလှပသော discrete ကျန်ကြွင်း! စားသောက်ဆိုင်များ, ဘားများ, သဘာဝရေကန်များ, ဆိပ်ကမ်းနှင့် ...
ကမ်းခြေကနေ Big House + ဘား 250 မီတာ!
ရောင်းရန်: La Caleta de Interian၊ Garachico, Tenerife ရှိကျယ် ၀ န်းသောသုံးထပ်တိုက်လုံးချင်း။ La Caleta ကမ်းခြေမှမီတာ ၂၅၀ အကွာတွင်တည်ရှိသောနေရာကောင်းဖြစ်သည်။
San Andres၊ Santa Cruz de Tenerife Tenerife
ရောင်းရန်: Sun Andres ၏အလယ်ဗဟို၊ မြို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလမ်းတွေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးနေရာ။ ၁၅၀ ပဲ
La Arena ကမ်းခြေနားတွင်ကျယ်သောတိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: La Arena ကမ်းခြေ၊ ကမ်းခြေကမိနစ်အနည်းငယ်သာလမ်းလျှောက်နိုင်သည်။ အိပ်ခန်းပြတင်းပေါက်ကနေပင်လယ်မြင်ကွင်း ...
Puerto De La Cruz ရှိသဲသောင်ပြင်အနီးရှိခေတ်မီတိုက်ခန်း!
ရောင်းရန်: ထင်ရှားသော Jardin ကမ်းခြေ၊ Puerto de la Cruz၊ Tenerife အကောင်းဆုံးနေရာ ...
ကမ်းခြေမှ Duplex + Lock Up Garage 200 မီတာ!
ရောင်းရန်: San Miguel de Tajao၊ Tenerife ရှိအံ့ဖွယ်ကောင်းသောပစ္စည်းများ! ကမ်းခြေ၊ ငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းနှင့်အကောင်းဆုံးစားသောက်ဆိုင်များမှမီတာ ၂၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိသည်။
Playa San Marcos ရှိ Oceanfront စတူဒီယိုတိုက်ခန်း !!
ရောင်းရန်: Playa San Marcos၊ Tenerife ရှိလှပသောပင်လယ်ကမ်းခြေရှိတိုက်ခန်း !! ပထမ ဦး ဆုံးသမုဒ္ဒရာအတန်း !!! အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်သမုဒ္ဒရာရှုခင်းများပါသောအခန်းတစ်ခန်းစီရှိ ၀ င်းဒိုးများ !! ဓာတ်လှေကားကသင့်ကိုခေါ်ဆောင်သွားသည်။
တိုက်ခန်း + ကားရပ်နားရန်နေရာ (၁၀၀) မီတာမှ Ocean!
ရောင်းရန်: မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်ရှိတိုက်ခန်း + ကားရပ်နားရန်နေရာ၊ Playa de la Arena, Tenerife! သမုဒ္ဒရာကနေမီတာ ၁၀၀ အကွာမှာပဲ။ နှစ်မိနစ်လောက်လမ်းလျှောက်ဖို့ ...
သဲသောင်ပြင်မှ ၁၅၀ မီတာရှိ La Caleta ရှိဆောက်လုပ်ရေးကွက်များ !!
ရောင်းရန် - Tenerife, La Caleta de Garachico ၏မီးဖို၌အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအဆောက်အအုံနှစ်ခုရှိသည်။ သင်၏အိပ်မက်အိမ်ကိုသမုဒ္ဒရာ၌တည်ဆောက်ပါ။
Puerto De Santiago တွင်ဗဟိုပြုတိုက်ခန်းပါသောတိုက်ခန်း
ရောင်းရန်: Puerto de Santiago, Tenerife အလယ်ဗဟိုတွင်လှပသောတိုက်ခန်း! ဒုတိယထပ်တွင် Lidl အနီးရှိကောင်းမွန်သောအဆောက်အ ဦး နှင့်…
Costa Del Silencio ရှိ Terrace တိုက်ခန်းကြီး!
ရောင်းရန်: Costa del Silencio၊ Tenerife ရှိအိပ်ခန်းကျယ် ၂ ခန်းပါသောတိုက်ခန်း! တင်းနစ်ကွင်းများ၊ ရေကူးကန်များနှင့်ရေတွင်းကန်များရှိသည့်မြို့၏အကောင်းဆုံးအသိုင်းအဝိုင်း ...
Puerto De Santiago ရှိခေတ်မီ။ ကျယ်ဝန်းသည့်တိုက်ခန်း။
ရောင်းရန်: Puerto de Santiago, Tenerife အလယ်ဗဟိုတွင်ခေတ်မီသောအိမ်ခြံမြေများ! Plaza၊ အရက်ဆိုင်များ၊ စျေးဆိုင်များ၊ စူပါမားကက်များနှင့်အနည်းငယ်သာအလှမ်းဝေးနိုင်သည်။
Candelaria တွင်ကမ်းခြေတိုက်ခန်း + ဂိုဒေါင် !!!
ရောင်းရန်: Tenerife၊ ဆိပ်ကမ်းနှင့်ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၈၀ အကွာတွင်ရှိသောသက်တောင့်သက်သာရှိသောတိုက်ခန်း !!! အရမ်းကောင်းမွန်သောတည်နေရာနှင့်စျေးနှုန်းတစ်ခု ...
9000m2 Urbanos Con2Casas Canarias + Garaje + တည်ထောင်
Los Icod de Los Vinos, Icod de Los Vinos Tenerife
SE VENDE: Tenerife မှ Propiedad con vistas 360º al mar y al teide en el centro de Los vinos, Tenerife! Finca con apx ။ ၉၀၀၀ ...
ကမ်းခြေမှရေကူးကန် ၃၀၀ မီတာရှိသောတိုက်ခန်း
ရောင်းရန် - Tenerife, Las Caletillas ရှိသဲသောင်ပြင်မှမီတာ ၃၀၀ အကွာတွင်ရှိသောအလွန်ကောင်းသောအိမ်ခြံမြေ။
Las Caletillas ရှိကမ်းခြေမှရေကူးကန် ၃၀၀ မီတာရှိသောတိုက်ခန်း
El Poris ခုနှစ်တွင်ကျယ်ဝန်းပင်လယ်ကမ်းခြေတိုက်ခန်း !!
ရောင်းရန်: El Poris, Tenerife ရှိကျယ်ဝန်းသည့်ပင်လယ်ကမ်းခြေပိုင်ဆိုင်မှု! ရေမှမီတာ ၁၅၀ အကွာတွင်ရှိသောသမုဒ္ဒရာရှုခင်းများနှင့်ပြည့်စုံသောတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ လွှဲနှင့်အတူကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ရှုပ်ထွေးသော ...
La Perla ရှိ Terrace တိုက်ခန်းကြီးနှင့်ကားရပ်နားရန်နေရာ !!
ရောင်းရန်: Tenerife, Playa de la Arena တွင်ကြီးမားသောပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသောလှေကားထစ်ကြမ်းရှိသောအိမ်ခြံမြေများ! Playa de la Arena အလယ်ဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီး ...
Los Abrigos ရှိအဏ္ဏဝါပင်လယ်မှ 150m ရှိတိုက်ခန်း !!
Los Abrigos၊ Granadilla de Abona၊ Tenerife ရှိလှပသောတိုက်ခန်းရောင်းရန်! အိမ်ခြံမြေသည်မီတာ ၁၅၀ အကွာတွင်တည်ရှိသောတိတ်ဆိတ်သောလူနေအိမ်ရာလမ်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။
Puertito ခုနှစ်တွင်သမုဒ္ဒရာမှမီတာ 80 တိုက်ခန်း !!
Tenerife၊ Puertito de Guimar တွင်ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်းသုံးခန်း။ သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၈၀ နှင့်ကမ်းခြေမှမီတာ ၄၀၀ အကွာတွင်ကျယ်သောတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။
ကမ်းခြေကနေလှပတဲ့တိုက်ခန်း 200 မီတာ !!
Las Caletitas, Candelaria, Tenerife ရှိသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေတိုက်ခန်းရောင်းရန်ရှိသည်။ ကမ်းခြေနှင့်မီတာ ၂၀၀ အကွာတွင်ရှိသောတိုက်ခန်းသစ်မှာစုံလင်ပါသည်။ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ် - Alcala တွင်သီးသန့်ရပ်နားရန်နေရာရှိသည်။
မှ € 142,800
ရောင်းရန်: Tenerife, Alcala မြို့လယ်ရှိတိုက်ခန်းသစ်များရွေးချယ်ခြင်း! ၅ မိနစ်အတွင်းမြို့၏တိတ်ဆိတ်သောနေရာတွင်ကောင်းမွန်သောတည်နေရာ ...
Puerto De Santiago တွင်ပထမ ဦး ဆုံး Ocean Line
ရောင်းမည်: Puerto de Santiago ရှိ Oceanfront ကျယ်ဝန်းသောတိုက်ခန်း, Tenerife! ပလာဇာအနီးအလယ်ဗဟို။ La Arena ကမ်းခြေသို့ ၃ မိနစ်သာလမ်းလျှောက်။ ...
Alcala အတွက်အဆောက်အ ဦး ၏တစ်ဝက်
Tenerife, Alclala ရှိအဆောက်အ ဦး ပေါ်တွင် ၅၀% ရောင်းရန်ရှိသည်။ သမုဒ္ဒရာမှမီတာ ၄၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိပြီး ၃ မိနစ်ခန့်လမ်းလျှောက်လျှင် ...
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်ရှိ las Terrazas I & Ii ရှိဇိမ်ခံတိုက်ခန်းများ
Sotaviento, Granadilla က de Abona
မှ € 160,000
Tenerife, Sotaviento, Las Terrazas II နှင့်လူနေအိမ်ရာအဆောက်အအုံရှိ Las terrazas II တွင်ရောင်းရန်ရှိသောတိုက်ခန်းအသစ်များ။ ရောင်းရန်တိုက်ခန်း ၁၂၀ ရှိပါတယ်။
အိပ်ခန်း ၂ ခန်းနှင့်ရေချိုးခန်း ၂ ခန်းပါသောကျယ် ၀ န်းသောဇိမ်ခံတိုက်ခန်းဖြစ်သည်။ ရေကူးကန်နှင့်မြေအောက်ကားဂိုဒေါင်များပါရှိသည်။ နေထိုင်ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ပြီး - ၁၀၀% မီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ထားသည် ...
Puerto Santiago ရှိကမ်းခြေငါးဖမ်းဆိပ်ကမ်းတိုက်ခန်း!
€ 980 / လ
Puerto Santiago တွင်ရှိသောလှပသောသမုဒ္ဒရာကမ်းခြေတိုက်ခန်း။ Chica သဲသောင်ပြင်မှတစ်မိနစ်လမ်းလျှောက်ပါ! နေထိုင်ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ပြီး - …
€ 1,060 / လ
La Arena Sandy ကမ်းခြေမှမီတာ ၁၅၀ အကွာတွင်ရှိသော apartment ည့်ခန်းနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြုပြင်ထားသော Oceanfront တစ်ခန်း၊ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားပြီးနေထိုင်ရန်အတွက် ...
ရေကူးကန်နှင့်အတူ Oceanfront Duplex တိုက်ခန်း !!
Playa de la Arena၊ Guia de Isora Tenerife
€ 1,680 / လ
ပထမထပ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းတွင်ကျယ် ၀ န်းသောအိပ်ခန်း ၂ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၂ ခန်းပါ ၀ င်သည်။ နေထိုင်ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသား: - လျှပ်စစ်မီးဖိုချောင်ပါသော ၁၀၀% မီးဖိုချောင်၊
သီးခြားရေကူးကန်နှင့်အတူစတိုင်လ်ဗီလာ! သဲသောင်ပြင်မှ 600m!
Playa de San Juan၊ Guia de Isora Tenerife
€ 5,250 / လ
Tenerife, Playa de San Juan ရှိလှပသောရိုးရာအိမ်တော် သဲသောင်ပြင်နှင့်ငါးဖမ်းရာနေရာမှမီတာ ၆၀၀ အကွာတွင်ရှိသည်။ ပရိဘောဂအပြည့်အစုံတပ်ဆင်ထားပြီးနေထိုင်ရန်အတွက် ...
ကမ်းခြေသို့“ သီးသန့်” ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသော Oceanfront တိုက်ခန်း!
€ 1,200 / လ
Tenerife, Playa de la Arena ရှိကမ်းခြေအသစ်ရှေ့တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတည်နေရာ။ နေထိုင်ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးအသင့်ပြင်ဆင်ပြီး - ၁၀၀% မီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ထားသည် ...
ရေကူးကန်နှင့်အတူ Penthouse! မကြာသေးမီကပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ!
€ 1,280 / လ
La Arena သဲသောင်ပြင်ရှေ့တွင်လှပသောမကြာသေးမီကပြန်လည်ပြင်ဆင်ထားသောမိုးမျှော်တိုက်! နေထိုင်ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသား: - ၁၀၀% မီးဖိုချောင်သုံးလျှပ်စစ်တပ်ဆင်ထား ...
€ 930 / လ
La Arena Sandy ကမ်းခြေမှမီတာ ၁၅၀ အကွာတွင်သမုဒ္ဒရာကမ်းခြေ၊ အိပ်ခန်း ၁ ခန်း၊ အပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားပြီးနေထိုင်ရန်ပြင်ဆင်ထားသည် - ၁၀၀% တပ်ဆင်ထားသည် ...
€ 1,350 / လ
La Arena သဲသောင်ပြင်မှမီတာ ၁၅၀ အကွာရှိစတိုင်ကျလှသည့်အိပ်ခန်း ၂ ခန်း၊ ရေချိုးခန်း ၂ ခန်းပါသော။ နေထိုင်ရန်အတွက်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးသား: - ၁၀၀% သောမီးဖိုချောင်တပ်ဆင်ထားသော ...
22: 09 20 နိုဝင်ဘာ 19
знаемребятс 2011 года။ почтиежегодноснимаемапартаментына... Тенерифечерезних။ Всегдадружелюбноеотношениекнам, каккклиентам။ အကယ်၍ မေးခွန်းများပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာသောအခါယုံကြည်စိတ်ချရသောအရာသည်နောက်ဆက်တွဲတွင်ကျွန်းပေါ်တွင်နေထိုင်နေရသောကာလကြာရှည်နေထိုင်ခွင့်ကိုရရှိနိုင်ကြောင်း၊ ПуэртедеСантиагосотзывомпоотзывам :) Уверены, чтобудемпользоватьсяихуслугамиивдальнейшем။ဆက်ဖတ်ရန်
06:29 25 မေလ 14
21:43 16 မေလ 14
Замечательноеагентство။ Отдых, простосказка !!! доступупныецены။... Экскурсиипонравились။ Спасибобольшое!ဆက်ဖတ်ရန်
15: 02 22 ဧပြီ 14
Здравствуйте! ကျွန်ုပ်သည်အထူးကောင်းမွန်သောотпускаимытольковернулись... хотимподелитьсявпечатлениями: Намвсеоченьпонравилось !!! အပန်းဖြေခရီးသွားခြင်းနှင့်အထူးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ပွဲတော်များကိုဖိုရမ်များမှကူညီပေးခဲ့သည့်အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှကလေးငယ်များအားကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အစ ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖိလစ်ပိုင်တွင်ဂစ်တာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အပန်းဖြေစခန်းများအားပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်စတင်ခဲ့ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ အေဂျင်စီမှအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် - လာအို (29 ယူရို), လာအိုနိုင်ငံအလည်အပတ်ခရီးနှင့်အတူကျွန်းများသို့အလည်အပတ်ခရီးသွားရန်လာအို (၂၉ ယူရို)၊ လာအိုပင်လယ်ဓားပြ (၅၇ ယူရို) တွင်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်အတူလှေစီးပြေးသွားသောလေယာဉ်နှင့်ခရီးသွားလာခြင်းနှင့်လာအိုနိုင်ငံ၊ вином! Loro Park уребят! သူရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာကယူရို ၁၁ ဒေါ်လာဖြစ်ပြီးအဆင်ပြေပါတယ်။ ဟိုတယ်အနားကရပ်နားပြီးလမ်းလျှောက်သွားပြီး ၆ နာရီကြာအချိန်အတိုင်းအတာကိုရောက်ခဲ့တယ်။ 57 ကြိမ်! Впечатленияотшоузашкаливали! အားလုံးэкскурсиибылиначистомрусскомязыке။ всем, чтомыможембытьуверенывтом, чтомыможемдоверять Ужепланируемпоездкутудаже။ ခဏနေတော့မတွေ့သေးဘူး။ Спасиборебятамзапрекрасныйотдыхиудачи!ဆက်ဖတ်ရန်
17: 06 21 ဧပြီ 14
Яорганизуюорганизаторыуслуги,... экскурсийоченьконкретныиблагонадежны။ Обслуживаниеоставляеттольколучшиевпечатления, незабываемое, сказочноеудовольствие! Всемприятногоотдыха!ဆက်ဖတ်ရန်
15: 53 26 မတ်လ 14
Лоро-парк Добираться... №325စီစဉ်ခဲ့သည်။ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မတီဥက္ကМолод္ဌကလူငယ်များအနေဖြင့်ကားဖြင့်ခရီးသွားရာတွင် (၃ နာရီ) နာရီခန့်ကားမောင်းရန်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်။ သွားနေရသည်။ экспресс-экспресс။ Мывысказывалисомнение: проявилидорогуподорогимидорогимподороге, проезднаавтобусе 3, သူမလှပတဲ့ ... ဒါပေမယ့်ခိုင်လုံတဲ့အချက်များကစျေးနှုန်းနှင့်အချိန်ကို ကျော်လွန်၍ ဈေးနှုန်းများကိုကား ၀ ယ်ဖို့အဆင်မပြေဘူး။ ရေဒီယိုမှစိတ်ဝင်စားသူများသည်လူ ၃၂၅ ၏လမ်းမကြီးကိုဖြတ်သန်းသွားသောကားသည်မြို့တော်သို့လာရာမြို့ရှိကားများအနက်နံနက်ခင်းသို့ထွက်ခွာလာသည့်လမ်းအရေအတွက်ဖြစ်သည်။ ရေတစ်နာရီ ၅ မိနစ် ((၃ နာရီ ၃ မိနစ်ခန့်) မဝေးတော့သည်) သည်ကားဆီသို့ ၉ ဒေါ်လာယူရိုဖြင့်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။ Сновапошливагентство။ သမီးလေးကငါတို့ကိုယုံကြည်မိသည်။ ၃၂၅ နဲ့ ၃ နာရီ ၃ နာရီကြာသွားပြီ။ Чтообще, онаживет, тамлибоошиблась, либосоврала! Экспрессвобестороны ပြန်သွားပါ ဦး ။ Нуданичего။ လေယာဉ်ကွင်းသို့ရောက်သောအခါ လော်ရော့စ်ပန်းခြံ (ПуэртоделалаКруз), полторачаса (вовсене 325 !!!) ကိုသွားပြီးနောက်ဘတ်စ်ကားကိုဖြတ်သွားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သူသည်မကိုက်ညီကြောင်း၊ဆက်ဖတ်ရန်
© 2020 ATLAS Tenerife®အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်း, All Rights Reserved ။ အပေါ်သို့ပြန်သွား